IFOMS | Independent Federation of Myanmar Seafarers
[tp lang=”my” only=”y”]သင့် အခွင့်အရေးများ ခိုင်မာဖို့ IFOMS နဲ့ အတူရပ်တည်စို့။[/tp] [tp lang=”en” only=”y”]Fighting Together For Your Rights Stand With IFOMS[/tp]
HISTORY OF IFOMS
[tp lang=”my” only=”y”]မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော သင်္ဘောသားဦးရေမှာ ၁၀၀၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး အမှန်တကယ်သင်္ဘောပေါ်တွင် အမှုထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော သင်္ဘောသားများဦးရေမှာ ၃၀၀၀၀ ခန့်သာရှိသည်။ မြန်မာသင်္ဘောသားအများစုမှာ နိုင်ငံတကာ နှင့် အခွင့်အရေးတန်းတူမရရှိဘဲ နိမ့်ပါးသောလစာ နှင့် လုံခြုံမှုမရှိသောသင်္ဘောများပေါ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသည်။ မှတ်ပုံတင် သင်္ဘောသားဦးရေများပြားသော်လည်း အမှန်တကယ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိသောဦးရေမှာ လွန်စွာနည်းပါးခြင်းကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ အချို့သောသင်္ဘောကိုယ်စားလှယ်များမှ သင်္ဘောသားများအား ဂုတ်သွေးစုပ်အမြတ်ထုတ်နေခြင်းများကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ ယင်းအခြေအနေ ဆိုးများကို ကာကွယ်ရန် မြန်မာသင်္ဘောသားများ စုပေါင်း၍ [/tp][tp lang=”en” only=”y”] Although there are about 100,000 registered seafarer in Myanmar, seafarers serving on board are about 30,000 in reality. Most of Myanmar seafarers are serving with low wages and unsecure work-place having no rights under the international standard. Some crooked crewing agents are exploiting the seafarers taking chances of rare job opportunities in Myanmar. To protect those bad situation, some Myanmar seafarers organized and founded the Independent Federation of Myanmar seafarers (IFOMS) on 3rd June, 2014. The purpose of federation is [/tp]
[tp lang=”my” only=”y”]မိမိတို့၏ ရပိုင်ခွင့် နှင့် အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန်၊ [/tp][tp lang=”en” only=”y”] To protect the rights of seafarers[/tp]
[tp lang=”my” only=”y”]မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အန္တရယ်ကင်းရှင်း၍ လုံခြုံမှုရရှိစေရန်၊[/tp][tp lang=”en” only=”y”] To get the safety working condition[/tp]
[tp lang=”my” only=”y”]ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများအတွက် ရသင့်ရထိုက်သော အကျိုးခံစားခွင့်များကို အပြည့်အ၀ရရှိစေရန်၊[/tp][tp lang=”en” only=”y”] To get full rights with compensation [/tp]
[tp lang=”my” only=”y”]အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိစေရန်အတွက် လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ပျော်များအဖွဲ့ချုပ် (IFOMS) ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန် လ၊ ၃ ရက်နေ့တွင် သင်္ဘောသားများစုပေါင်း၍ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ [/tp][tp lang=”en” only=”y”] To promote job opportunities [/tp]
[tp lang=”my” only=”y”]မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ပျော်များကို စုစည်း၍ကိုယ်စားပြုနိုင်သည့် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ပင်လယ်ရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်ကို တည်ထောင်ရန်။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To organize and represent Burmese seafarers of all grades intoademocratic and transparent maritime federation.[/tp]
[tp lang=”my” only=”y”]နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များ၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းသမဂ္ဂများ နှင့် နီးကပ်စွာလက်တွဲဆာင်ရွက်ပြီး ရပိုင်ခွင့် နှင့် အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းလောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To work closely with international labor federations and maritime unions globally to protect the rights of all seafarers and improve standards across the maritime industry.[/tp]
[tp lang=”my” only=”y”]IFOMS ၏ အဖွဲ့ဝင်များကို အဆင့်အတန်း၊ လူမျိုး၊ အသားအရောင်၊ လိင်၊ ဘာသာ မည်သည့်ခွဲခြားမှုမျှမရှိပဲ လေးစားစွာဆက်ဆံရန်။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To treat all members of IFOMS with dignity and respect and without prejudice and discrimination.[/tp]
[tp lang=”my” only=”y”]IFOMS ၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ရိုသေလေးစား စွာလိုက်နာရန်။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To promote individual members’ abilities and their participation in their federation.[/tp]
[tp lang=”my” only=”y”]အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ အရည်အချင်းကိုတိုးတက်အောင်မြှင့်တင်ပေးပြီး အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ပူးပေါင်းဆာင်ရွက်ရန်။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To promote the safety and well-being of members and their families within IFOMS regulations.[/tp]
[tp lang=”my” only=”y”]အဖွဲ့ချုပ်၏ ချမှတ်ထားသော စည်းမျည်းဥပဒေအတွင်းမှ အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ၄င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ လုံခြုံရေးနှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To protect seafarers’ rights and to pursue legitimate claims on behalf of members of IFOMS.[/tp]
[tp lang=”my” only=”y”]အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် တရားနည်းလမ်းကျသောတောင်းဆိုမှုများကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကိုယ်စားတောင်းဆိုပေးရန်။[/tp] [tp lang=”en” only=”y”] To protect the rights of members[/tp]
[tp lang=”my” only=”y”]အလုပ်ရှင် နှင့် အလုပ်သမားကြားကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးကို အတတ်နိုင်ဆုံးမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To promote wherever possible harmonious working relationships between employee and employer.[/tp]
[tp lang=”en” only=”y”]IFOMS is an independent and democratic trade union federation campaigning in solidarity with international unions/federations to protect the rights of maritime workers and improve the quality of life for all Myanmar seafarers. [/tp][tp lang=”my” only=”y”]IFOMS အဖွဲ့ချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ပျော်များ / ရေကြောင်းလုပ်သားများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဘဝအရည်အသွေးများ တိုးတက်အောင် မြှင့်တင်ပေးရန်၊ နိုင်ငံတကာမှ သမဂ္ဂ / အဖွဲ့ချုပ်များနှင့် သွေးစည်းညီညွတ်စွာပူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ရန် ဒီိမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်သည်။[/tp]
ITF – ILO MLC 2006 Seminar
MLC 2006 Booklet- 1
MLC 2006 Booklet- 2
Case Update (2016)
Case Upade 2016 (End of September 2016)
ITF General Secretary Stephen Cotton with IFOMS President Zaw Aung and IFOMS General Secretary Aung Kyaw Linn
Yoshihiro Shimmi, All-Japan Seamen’s Union
Dean Summers, Maritime Union of Australia
KPI President and ITF Asia/Pacific Regional Chair Hanafi Rustandi